USB H.० हब भनेको के हो? | हुआचुआ Elect इलेक्ट्रोनिक
USB h.० हब
२०० 2008 मा प्रस्तुत यूएसबी standard.० मानकले टेक्नोलोजिकल पूर्ववर्ती युएसबी २.० को तुलनामा ठूलो वृद्धि गरिएको डाटा थ्रुपुट दरको आश्वासन दियो। यूएसबी previous.० अघिल्लो प्रविधिहरूको साथ उपयुक्त छ भन्ने तथ्यका कारण, पुराना उपकरणहरू अझै पनि नयाँ USB h.० हबको साथ प्रयोग गर्न सक्षम छन्।
USB of.० को फाइदाहरूको सारांश
१०.० USB 2.0 भन्दा छिटो
डाउनवर्ड युएसबी २.० उपकरणसँग उपयुक्त छ
USB h.० हब किन प्रयोग गर्नुपर्दछ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन तपाईंले USB h.० हब प्रयोग गर्नुपर्दछ। ती कारणहरू मध्ये एक हो तपाईंले टेक्नोलोजीको भविष्यको बारेमा सोच्न। ढिलो वा चाँडो, अन्तिम उपकरणहरू जसले केवल यूएसबी २.० मानक समर्थन गर्दछ बजारबाट हराउनेछ। यो सबै अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाईं यो विचार गर्नुहुन्छ कि एक नवीनता पहिले नै विकसित भएको छ, जसलाई युएसबी 1.१ (सुपरस्पेड +) भनिन्छ। यूएसबी २.० अतः घट्दै छ र उपेक्षा गर्न सकिन्छ, किनकि USB h.० हबले अन्तिम उपकरणहरू पनि २.० प्रविधिको साथ ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यदि एक USB जडानको साथ नयाँ अन्त उपकरणहरू खरीद गरियो भने, तिनीहरू सामान्यतया पहिले नै USB 3.0.० को साथ आपूर्ति गरिन्छ।
वर्तमान यूएसबी h.० हबहरू
HuaChuang USB 3.0--पोर्ट
WIWU USB 7.77-पोर्ट
यदि तपाईं एक यूएसबी २.० हब खरीद गर्नुहुन्छ र अन्तिम उपकरणहरू छन् जुन USB support.० लाई समर्थन गर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यसो गर्नुपर्दा तपाईं USB of.० को भारी गति फाइदा बिना नै गर्नुपर्नेछ। त्यसले प्राविधिक वा आर्थिक रूपमा कुनै अर्थ राख्दैन। यदि हब अवस्थित पूर्वाधारमा एकीकृत गर्न छ भने, USB h.० हबको छनोट अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ।
USB h.० हब मार्फत डाटा ट्रान्सफर कत्तिको चाँडो हुन्छ?
एक USB 3.0.० हब को स्थानान्तरण दर धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। डाटा स्थानान्तरणको लागि अधिकतम सम्भव गति प्राप्त गर्न, यो आवश्यक छ कि यसमा समावेश सबै कम्पोनेन्टहरू र उपकरणहरूले USB 3.0.० मानक समर्थन गर्दछ। उदाहरण को लागी, लेखन र पढ्ने पहुँचको बखत अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त गर्न बाह्य हार्ड ड्राइभ ड्राइभ गर्नका लागि, मुख्यबोर्डमा USB पोर्ट, USB हब र बाह्य हार्ड ड्राइभ स्पष्ट रूपमा USB for.० को लागि डिजाइन गर्नुपर्दछ। यो प्लग र USB स्लट भित्र नीलो तत्वहरुबाट देख्न सकिन्छ।
के हुन्छ यदि मैले USB २.० उपकरणलाई USB h.० हबमा जडान गर्दछ भने?
सिद्धान्तमा, केहि पनि हुन सक्दैन जुन USB h.० हब, अन्तिम उपकरण वा मुख्यबोर्ड बिगार्न सक्छ। यद्यपि, तपाईले गतिमा महत्वपूर्ण ड्रपको साथ बाँच्नु पर्छ यदि उल्लेखित तत्त्वहरू मध्ये एकले USB 3.0 समर्थन गर्दैन।
त्यहाँ एक USB h.० हब छ जसले प्रकार्यहरूको विशेष दायरा प्रस्ताव गर्दछ?
वास्तवमा यस्तो USB h.० हब छ। बिभिन्न संस्करणहरू उपलब्ध छन्। केहि WWAN लाई समर्थन गर्दछ, अन्यसँग कार्ड रिडर एकीकृत छ र यसरी USB उपकरणहरू बीचको सम्बन्धको लागि केन्द्रीय तत्वको रूपमा मात्र कार्य गर्दैन, तर SD कार्डहरू पढ्नको लागि नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा पनि।